Farriinta maalinta caalamiga ah ee soo afjaridda ciqaab la’aanta kuwa gaysta dambiyada ka dhanka ah suxufiyiinta | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Farriinta maalinta caalamiga ah ee soo afjaridda ciqaab la’aanta kuwa gaysta dambiyada...
Farriinta maalinta caalamiga ah ee soo afjaridda ciqaab la’aanta kuwa gaysta dambiyada ka dhanka ah suxufiyiinta
Munaasabadda sannadkaan ee Maalinta caalamiga ah ee soo afjaridda ciqaab la’aanta Kuwa gaysta dambiyada Ka dhanka ah Saxafiyiinta, adduunku, oo ay warbaahintu ka mid tahay, wuxuu wajahayaa caqabad cusub: oo ah COVID-19.
Cudurka safmareenka ah si gaar ah u muujiyay arrimo cusub oo halis ku ah saxafiyiinta iyo shaqaalaha warbaahinta, xataa iyadoo ay korodhay tirada weerarrada lagu hayo badqabkooda jir ahaaneed. Waxaa dhacay ugu yaraan 21 weerar oo lagu qaaday saxafiyiin wararka ka soo tebinayay dibadbaxyo barkii hore ee sannadka 2020 – taasoo la eg tirada weerarradaasi oo kale ee dhacay sannadkii 2017 oo idil. Waxaa sidoo kale jiray xakamayn dheeraad ah oo lagu sameeyay shaqada saxafiyiinta, oo ay ka mid yihiin in lagu handado maxkamadayn, soo qabasho, xabsi, in loo diido inay gaaraan goobihii ay shaqada saxafinimo ka qaban lahaayeen iyo in baaritaan lagu sameyn waayo lana maxkamadayn waayo kuwa gaysta dambiyada iyaga ka dhanka ah.
Marka saxafiyiinta la bartilmaameedsado, bulshada oo dhan ayaa dhibku soo gaari doonaa. Haddii aynaan saxafiyiinta ilaalin, waxaa carqalad ba’an ku imaan doonta awoodda aan u leenahay inaan xog-ogaal ahaano iyo inaan qaadano go’aanno caddaymo ku salaysan. Marka ay saxafiyiintu shaqadooda si badqab ah u gudan karin, waxaan waayaynaa arrin muhiim ah oo naga difaacda cudurka safmareenka ah ee warxuma tashiilka ama wararka qaldan iyo xogta been abuurka ah ee ku faaftay shabakadda internetka.
Wararka iyo falanqaynta xaqiiqada ku salaysan waxay ku tiirsan yihiin ilaalinta iyo badqabka saxafiyiinta qabanaya shaqada soo tebinta wararka, eek u qotonta mabda’a asaasiga ah ee: “saxafinnimo aan cabsi iyo eex lahayn”.
Iyadoo uu adduunku la dagaallamayo cudurka safmareenka ah ee COVID-19, waxaan ku celinayaa baaqaygii aan ku baaqay saxaafad xor ah oo kaalinteeda lagama maarmaanka ah ka caari karta nabad, cadaalad, horumar la joogtayn karo iyo xuquuqul insaan.
Previous articleTaliyaha qeybta 27-aad ee Xoogga Dalka oo maanta kormeeray fariisimaha ciidanka ay ku leeyihiin degmada Buulo barde ee Gobolka Hiiraan, MUUQAAL
Next articleKulan looga hadlayay horumarinta dalagyada ay soo saaraan Beeraleyda ku nool Koofur galbeed oo maanta lagu qabtay Magaalada Baydhabo,+MUUQAAL.